रोबोटलाई विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा दिएपछि ……
जापानको नारिता विमानस्थलमा सुरक्षाका लागि रोबोटको प्रयोग गरिने भएको छ । जापानको चिबा प्रिफेक्चरको छिमेकमा रहेको नारिता विमानस्थल मध्य टोकियोमा पर्दछ । यस विमानस्थलमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि रोबोटको प्रयोग गरिने भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? विश्वकै सबैभन्दा मँहगो वस्तु, एक ग्रामको मूल्य ५ सय खर्ब !
बाँदरको यौनशोषण गर्ने युवतीको भिडियाे साथीले भाइरल गरिदिएपछि यी महिलाले पाइन ३ वर्षकाे जेल सजाय
अमेरिकी यी ७ वर्षीय बालकले यूटुवबाट वार्षिक कमाउँछन् दुई करोड डलर
वैज्ञानिकहरुको दावी : अफ्रिका महादेश दुई टुक्रामा विभाजित हुनेछ र हिन्द महासागरमा नयाँ महादेश जन्मिनेछ
जमिनमुनी बनाईएको सुन्दर शहर,जहाँ चल्छ मेट्रो (भिडियोसहित)
पृथ्वीसँग जोडिएका १५ रोचक तथ्‍य